Tsy kely lalana ny sinoa | 102 KARA
Tsy kely lalana ny sinoa
Tsy ny tsenam-barotra ihany no ahalalana ny sinoa, satria azo lazaina fa mahenika an’izao tonolo izao mihintsy izy eo amin’io sehatra io. Ahafantarana indrindra ihany koa azy ireo ohatra, ny hai-tao ara-tsakafo izay ankafizin’ny maro eo amin’ny karazany sy ny tsirony : ary dia misy mihintsy aza ny sasany izay manao kivazivazy milaza ny hoe : » efa tsy fantatra intsony itony karazan-kanina omen’ny sinoa antsika ity « .
Fa izao farany izao dia fifaninanan-kira no nampanaovin’ny sampana mampianatra teny sinoa, eny amin’ny Oniversitén’Antananarivo, ka ny 9 Jiona no nanomboka ny fifanitsanana. Irony karazana karaoké irony no nihirana tamin’izany, ka nahatratra 150 ny
La chanteuse Zhang Liangying
mpandray anjara ary teo amin’ny sokajin-taona isan-karazany ary lehilahy sy vehivavy. Azo natao ihany koa ny mihira irery, na hiran’olon-droa na telo ka hatramin’ny rodobe mihintsy. Nizara sampana telo tamin’ny efitrano telo samihafa ny fifanitsanana ka dia mazava ho azy fa sinoa ireo mpitsara.
Raha ny mikasika ny bà sy ny gadon-kira ary ny karazany, dia tao avokoa ny hira sinoa hatramin’ny fahagolan-tany, ny vako-drazana ary ny hira ankehitriny fanaon’ny zatovo mifanahantsahana amin’ny rap na ny slam..
Koa taorian’nyfifanitsanana dia 48 no tafita handray anjara amin’ny manasa-dàlana tamin’ny lanonana natao tamin’ny trano fisakafoana sinoa iray teny IVATO.Ary dia soritana fa ny mpandresy farany amin’izao fifaninana izao dia hotolorana ny vola 6 000 000 ariary.
Mpandray anjara iray tamin’ny fifaninanana no tafaresaka taminay, ka nilaza fa tsara ny fisian’ny tahaka izao, satria mahaliana no sady ahafahana manitatra ny fahalalàna ny fomba amam-panao ary ny zava-kanton’ny Firenena hafa. Nisy somary nampiomehy ihany koa anefa satria nisytamin’ireo mpifaninana no nananosarotra be mihintsy niteny sinoa. Fa ho an’ny mpianatra tamin’ity lalam-piofanana sinoa eto amin’ny Oniversitén’Antananarivo ity, dia nandeha tsara ny hira, ary nampitolagaga mihintsy aza satria raha nikipy nihaino ny hira dia nilaza fa sinoa mihintsy izany mihira izany.
Dia mba lasa ihany ny saina hoe : mba aiza ho aiza isika amin’ny fanabeazam-boa sy fampahalalana ny fomba amam-panao, ny TANTARA, ny FITENY, ary ny ZAVA-KANTO TENA MALAGASY » Misy mantsy ny sasany dia manao izany ho toy ny valalan’amboa ka ny tompony aza TSY TIA azy. KEVOKA ery MAKA TAHAKA ny an’ny hafa kanefa ny an’ny TENA AZA TSY HAY. Mampalahelo ny tahaka izany ary anatitranterana indray ilay fehezan-teny hendry sy manana ny maha-izy azy manao hoe :
» ANDRIANIKO NY TENIKO, NY AN’NY HAFA KOA FEHEZIKO »
16 juillet 2013 - 4 h 24 min Culture 977 vues